» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग ११
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग ११
५ बैशाख २०७७, शुक्रबार १९:४१
मकवानपुर, ५ बैशाख । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ अहिले चर्चामा छ । नेपालकै ठूलो भनेर दाबी गरिएको सिंगिङ रियालिटी शोको चितवन अडिसनबाट केही प्रतियोगीहरु दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका छन् । यस भिडियो सिरिजको एघारौँ भागमा चितवन अडिसनबाट छानिएका थप ३ जना प्रतियोगीहरु बिना सेञ्चुरी, महेन्द्रराज बराल र सलिना बिकका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
९) सलिना बि.क.– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि चितवनबाट छानिएकी नवौँ प्रतियोगी हुन् सलिना बि.क. । चितवनकी सलिना अहिले अध्ययनसँगै संगीतलाई पनि अगाडि बढाईरहेकी छिन् । संगीत क्षेत्रमा नै भविष्य खोजिरहेकी सलिनालाई परिवारबाट संगीत क्षेत्रमा लाग्न सबैको साथ छ । तर सामाजिक रुपमा भने छोरी भएका कारण समाजले लगाउने लाञ्छनाले उनलाई पिडा दिन्छ । छोरीले पनि केही गर्न सक्छे भन्ने देखाउन तम्तयार भएर अगाडि बढेकी सलिना संगीत क्षेत्रमै लागेर आमाबुवाको नामलाई चम्काउन चाहान्छिन् । यसअघि उनले नेपाल आईडलको केही सिजनमा समेत सहभागिता जनाएकी थिईन् । उनले अडिसनमा ‘मोया मोह’ बोलको गीत गाएर निर्णायकहरुको मन जितेकी थिईन् । अञ्जु पन्तलाई आईडल मान्ने गरेकी सलिनालाई अञ्जु पन्तले नै स्टेजमा गएर दोस्रो राउण्डका लागि छनौट गरेकी थिईन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमा कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।